झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण ! – हाम्रो देश
झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण !
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाललाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएको छ । उनलाई मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सोह्रखुट्टेमा भर्ना गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका नेता मोदनाथ प्रश्रितलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनलाई पनि सोही अस्पतालमा मनमोहनमै भर्ना गरिएको जनाइएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ७ सय ६३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । भने १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ३ लाख २८ हजार ८ सय ९३ पुगेको छ।